20 Ɛno akyi no, Moabfo+ ne Ammonfo+ ne nnipa bi a wofi Amonimfo+ mu bae sɛ wɔne Yehosafat rebɛko.+ 2 Na nkurɔfo bɛka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: “Dɔm kɛse bi fi po no afam wɔ Edom+ reba wo so, na wɔabedu Hasason-Tama a ɛne En-Gedi.”+ 3 Eyi maa ehu kaa Yehosafat,+ na ɔde sii n’ani so sɛ ɔbɛhwehwɛ Yehowa.+ Enti ɔkae sɛ Yuda nyinaa nni mmuada.+ 4 Afei ɔboaboaa Yudafo ano, na wokobisaa Yehowa.+ Yuda nkurow nyinaa mu na wofi bae sɛ wɔrebebisa Yehowa.+ 5 Ɛnna Yehosafat sɔre gyinaa Yuda ne Yerusalem asafo no anim wɔ Yehowa fie+ adiwo foforo+ no anim, 6 na ɔkae sɛ:+ “O Yehowa, yɛn agyanom Nyankopɔn,+ ɛnyɛ wone ɔsoro Nyankopɔn,+ na ɛnyɛ wo na wudi amanaman ahenni nyinaa so?+ Ɛnyɛ wo nsam na tumi ne kɛseyɛ wɔ a obiara ntumi nnyina w’anim?+ 7 O yɛn Nyankopɔn,+ ɛnyɛ wo na wopam asase yi sofo fii wo man Israel anim+ na wode asase no maa+ wo dɔfo+ Abraham asefo sɛ wɔntena so daa? 8 Wɔbɛtenaa so, na wosii kronkronbea wɔ hɔ maa wo din,+ na wɔkae sɛ, 9 ‘Sɛ mmusu+ bi anaa nkrante anaa atemmu bɔne anaa ɔyaredɔm+ anaa ɔkɔm+ ba yɛn so a, ma yennyina ofie yi anim+ ne w’anim (efisɛ wo din+ wɔ ofie yi so), na yensũ mfrɛ wo yɛn ahohia mu, na tie yɛn na gye yɛn.’+ 10 Ammonfo+ ne Moabfo+ ne Seir+ bepɔw sofo a Israel fi Egypt asase so reba no, woamma wɔantow anhyɛ wɔn asase so na mmom wɔdan fii wɔn ho a wɔansɛe wɔn+ no, 11 hwɛ, nea wɔde retua yɛn ka+ ne sɛ wɔreba ha abɛpam yɛn afi agyapade a wode ama yɛn no so.+ 12 O yɛn Nyankopɔn, enti woremmu wɔn atɛn?+ Yɛn de, yenni ahoɔden biara a yɛde begyina dɔm kɛse a wɔaba yɛn so yi anim,+ na yenhu nea yɛnyɛ mpo;+ wo na yɛn ani da wo so.”+ 13 Saa bere no na Yudafo nyinaa gyinagyina Yehowa anim;+ wɔne wɔn mmofra,+ wɔn yerenom ne wɔn mma nyinaa. 14 Na Yahasiel a ɔyɛ Sakaria ba, Benaia ba, Yeiel ba, Matania ba, Lewini a ofi Asaf+ mma mu no, Yehowa honhom+ kaa no wɔ asafo no mu. 15 Na ɔkae sɛ: “Yuda ne Yerusalemfo nyinaa ne Ɔhene Yehosafat, monyɛ asõ! Nea Yehowa reka akyerɛ mo ni, ‘Munnsuro,+ na mommmɔ hu dɔm kɛse yi nti; efisɛ ɔko no nyɛ mo ko, na ɛyɛ Onyankopɔn dea.+ 16 Ɔkyena munsian nkɔ wɔn so. Wɔnam Sis aforoe hɔ reforo ba; na mobɛkɔ akɔto wɔn wɔ subon no awiei wɔ Yeruel sare no anim. 17 Ɛnyɛ mo na mobɛko.+ Munkogyinagyina hɔ, monyɛ komm+ na monhwɛ sɛnea Yehowa begye mo nkwa.+ O Yuda ne Yerusalem, munnsuro, na mommmɔ hu.+ Ɔkyena mumfi adi nkɔ wɔn so, na Yehowa bedi mo akyi.’”+ 18 Ɛhɔ ara na Yehosafat bɔɔ ne mu ase de n’anim butuw fam,+ na Yudafo ne Yerusalemfo nyinaa nso bɔɔ wɔn mu ase Yehowa anim, na wɔkotow Yehowa.+ 19 Ɛnna Lewifo+ a wɔyɛ Kohat+ ne Kora+ asefo no sɔree, na wɔde nne kɛse paa yii Yehowa, Israel Nyankopɔn no ayɛ.+ 20 Na wɔsɔree anɔpahema siim kɔɔ Tekoa+ sare so.+ Bere a wɔrekɔ no, Yehosafat sɔre gyinaa hɔ kae sɛ: “O Yuda ne Yerusalemfo nyinaa, muntie me!+ Munnya Yehowa mo Nyankopɔn mu gyidi+ na mo ase atim. Munnya n’adiyifo mu gyidi+ na asi mo yiye.” 21 Bio nso, ɔne ɔman no tuu agyina+ yiyii nnwontofo+ maa Yehowa na oyiyii wɔn a wɔhyehyɛ ntade kronkron+ de yi no ayɛ,+ na wodii akofo+ no anim kae sɛ: “Munyi Yehowa ayɛ,+ na n’adɔe wɔ hɔ daa.”+ 22 Bere a wofii ahurusi dwom ne ayeyi no ase no, Yehowa maa mmarima kɔtɛw+ Ammonfo, Moabfo, ne Seir bepɔw sofo a wɔreba Yuda so no, na wɔbobɔɔ wɔn ho.+ 23 Enti Ammonfo ne Moabfo no tow hyɛɛ Seir+ bepɔw sofo no so, na wɔsɛee wɔn maa wɔn ase tɔree; wɔsɛee Seirfo wiei no, obiara boaa ne nua ma wokunkum wɔn ho wɔn ho.+ 24 Na Yuda de, wɔkɔɔ ɔwɛn aban a ɛwɔ sare so no so.+ Bere a wɔdan wɔn ani hwɛɛ dɔm no, hwɛ, na wɔn afunu gugu fam+ a obiara amfi mu amfi. 25 Enti Yehosafat ne ne nkurɔfo no bɛfow wɔn ho asade+ no, na wohuu nneɛma ne ntade ne anwenne a ɛsom bo pii wɔ wɔn ho; woyiyi fae kosii sɛ wɔantumi ansoa bio.+ Nnansa na wɔde fow nneɛma no, efisɛ na ɛdɔɔso. 26 Da a ɛto so anan no, wɔboaboaa wɔn ano wɔ Beraka tataw so, na ɛhɔ na wohyiraa Yehowa.+ Ɛno nti na wɔfrɛɛ hɔ+ Beraka Tataw so de besi nnɛ. 27 Afei Yehosafat dii Yuda ne Yerusalem mmarima no nyinaa anim, na wosiim de ahurusi baa Yerusalem efisɛ Yehowa ma wodii wɔn atamfo ho ahurusi.+ 28 Enti wɔde asanku+ ne asankuten+ ne ntorobɛnto+ baa Yehowa fie+ wɔ Yerusalem. 29 Bere a asase no so ahenni nyinaa tee sɛ Yehowa ako atia Israel atamfo no, Onyankopɔn ho hu+ tɔɔ wɔn so.+ 30 Enti asomdwoe baa Yehosafat ahenni mu, na ne Nyankopɔn maa no ɔhome afã nyinaa hyiae.+ 31 Na Yehosafat+ toaa so dii Yuda so hene. Obedii ade no, na wadi mfe aduasa anum, na odii hene mfe aduonu anum wɔ Yerusalem. Ne maame din de Asuba+ a ɔyɛ Silhi babea. 32 Na ɔhene no nantew ne papa Asa akwan so,+ na wamman amfi ho, na ɔyɛɛ nea ɛteɛ Yehowa ani so.+ 33 Sorɔnsorɔmmea+ no nko na amfi hɔ; ná ɔman no nso nsiesiee wɔn koma mmaa wɔn agyanom Nyankopɔn.+ 34 Yehosafat ho nsɛm a aka, ne mfiase kosi n’awiei, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Hanani+ ba Yehu+ nsɛm mu wɔ Israel Ahene Nhoma+ no mu. 35 Eyinom akyi no, Yuda hene Yehosafat de ne ho kɔbɔɔ Israel hene Ahasia+ a ɔyɛɛ amumɔyɛde+ no. 36 Ɔne no ka boom yeyɛɛ ahyɛn a wɔde bɛkɔ Tarsis,+ na wɔyeyɛɛ ahyɛn wɔ Esion-Geber.+ 37 Nanso Maresani Dodawahu ba Elieser hyɛɛ nkɔm tiaa Yehosafat sɛ: “Sɛ́ wode wo ho akɔbɔ Ahasia+ nti, Yehowa nso bɛsɛe wo nnwuma.”+ Enti ahyɛn no sɛesɛee,+ na antumi ankɔ Tarsis.+